Uqhushululu olunobundlongondlongo lwaphuka eParis ngaphezulu kwesinyanzelo se-COVID-19 Jabs kunye nePasile yezeMpilo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Uqhushululu olunobundlongondlongo lwaphuka eParis ngaphezulu kwesinyanzelo se-COVID-19 Jabs kunye nePasile yezeMpilo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Uqhushululu olunobundlongondlongo luqhambuke eParis ngenxa yesinyanzelo se-COVID-19 jabs kunye nokupasa kwezempilo
“Ukupasa akuyi kudlula!” Yayiyingoma yabakhombisi abangqinga isakhiwo sombuso eNantes.
Uqhankqalazo olukhulu eFrance lonke lwenzeka ngoSuku lweBastille.
Kwaqhambuka ungquzulwano phakathi koqhankqalazo namapolisa eParis.
Amapolisa adubula irhasi yeinyembezi kubakhombisi abaphose amatye kunye neebhotile, batshisa izixhobo eParis, kunye nezakhiwo zikarhulumente.
Amawakawaka abaqhankqalazi bathathe izitrato zaseParis babonisa ngokuchasene noko Isigqibo sikarhulumente waseFrance ukwenza ugonyo lwe-coronavirus olunyanzelekileyo kubasebenzi bezempilo kunye nokwazisa ukupasa kwezempilo ukufikelela kwimivalo, iivenkile zokutyela, iithiyetha nakwezinye iindawo zikawonke-wonke.
Uqhanqalazo oluninzi kwilizwe lonke lwenzeka ngoSuku lwe-Bastille, isikhumbuzo se-1789 yesitrato esaziwayo saseParis esaqala uqhushululu lwaseFrance. EParis, amapolisa adubula iirhasi ukuze acinezele abaqhankqalazi.
Uqhanqalazo lwenziwe ngaphesheya kweFrance ngolwesiThathu ngongquzulwano olushushu oluqubuke namapolisa eParis. Amapolisa adubula iirhasi iinyembezi abaqhankqalazi abaphose amatye kunye neebhotile, babasa izixhobo zokwakha ngomlilo eParis, kunye nezakhiwo zikarhulumente ezikhethiweyo eFrance, ukuphendula I-anti-COVID-19 kaMongameli u-Emmanuel Macron.
Iifoto kunye neevidiyo ezivela kwikomkhulu laseFrance zibonise abaqhankqalazi bemisa izithintelo kwizinto ezifunyenwe kwindawo yokwakha. Abanye oomatshini bokwakha abashiyiweyo bengajongwanga babonakala betshisiwe.
EParis, abantu abazibonela ngawabo amehlo babamba abantu abaleka iirhasi njengoko amapolisa ayethunyelwe kumanani amaninzi ukuze kuqhekezwe imiboniso. Imithambo yesixeko enkulu inokubonwa ivaliwe ngabaqhankqalazi namapolisa. Kwesinye isihlandlo, i-canister yegesi yinyembezi yafika kufutshane nebala lokutyela, ibangela ukuba iidiners ziqhekeze ngaphakathi.
Imithombo yeendaba ezentlalo malunga noqhanqalazo ibandakanya ii-hashtag #PassSanitaire kunye #VaccinObligatoire, ebhekisa kwisibhengezo sangoMvulo esenziwe nguMacron sokuba abasebenzi bezempilo kuya kufuneka bagonywe nge-COVID-19 nge-15 kaSeptemba, okanye bajongane nokuphulukana nemisebenzi.
Uqhanqalazo oluncinci lwenzekile kwenye indawo esixekweni, amanye amaqela ebedibana ePeople de Clichy.
Umsindo wase-France wawungaphelelanga eParis, nokuba. Iividiyo ezivela kwilizwe liphela zibonisa uqhankqalazo eToulouse naseMarseilles emazantsi, eHaute-Savoie kumazantsi mpuma, naseNantes entshona, phakathi kwezinye iindawo.
Imiboniso nayo ibibanjelwe eCorsica, apho abantu bebehlanganisene ukugxeka into abayigxekayo njengokuhlaselwa kwenkululeko yomntu ngamnye, befuna ilungelo "lokuzikhethela" ngaphezulu kogonyo lwe-COVID-19.
Ngokweengxelo ezikwi-Intanethi, ngaphezulu kwabantu abayi-1,000 XNUMX bamatshe kwisixeko esisemazantsi eFrance iPerpignan.